Nagu saabsan - Hi Promos - Ningbo Hipromos International Trading Co., Ltd.
Waxaan u heellan nahay inaan soo bandhigno alaab iyo adeeg heer-sare ah kaas oo fududeynaya macaamiisheenna qiimaha leh si ay u ballaariyaan ganacsigooda marka laga reebo kuwa wax soo iibiya ee maxalliga ah iyo kor u qaadista mugga iibka, marka loo eego sicirkayaga tartanka iyo tayada adag. Waxaan ku dadaaleynaa inaan dhisno xiriir gaar ah oo muddo dheer ah oo aan la yeelano macaamil kasta, tijaabi lammaanahaaga cusub ee Shiinaha si aad u aragto waxa aan kuu qaban karno.
Hi Promos waxaa la aasaasay sanadkii 2010 isagoo soo saaraya alaab xayeysiis ah iyo badeecad sumadaysan Magaalada Ningbo, Shiinaha, waxay ku barwaaqoobaan inay noqdaan lammaanahaaga ugu sarreeya ee leh dhadhaminta waxtarka leh, kormeerka bilaashka ah ee amarrada socda iyo soo jeedinta maraakiibta aan qaaliga ahayn. Waxaan ka codsaneynaa shaqaale kasta oo xirfad leh horumarinta joogtada ah ee ganacsigeenna oo leh masuuliyad la isku halleyn karo oo buuxa, waxaan rajeyneynaa wacyigelin caan ah oo soo noqnoqota.
Waxaan nahay koox da 'yar oo la aamini karo oo leh dareeno, waa inaad ku faraxsan tahay inaad la shaqeyso shaqaalaheena hal-abuurka ah.
Bixinta suuq-geynta xayeysiinta ah ayaa runtii ah hab kharash-ku-ool ah oo lagu xayeysiiyo ganacsi, ururro ama dhacdooyin, kuwaas oo lagu hagaajin karo qoraal iyo muuqaal muddo dheer soconaya. Waxaan u heellan nahay inaan xirfad dheeri ah leenahay oo aan indhaha la sii saarno si aan wax badan uga baranno warshadaha wax soo saarka xayeysiinta ah, kuwaas oo naga caawiya la-hawlgalayaashayada in ay ballaariyaan ganacsiga alaabada taagan iyo waxyaabaha caadiga ah ee qiimaha jaban. Oo ay ku jiraan boorsooyinka xayaysiinta, koofiyadaha, waxyaabaha elektarooniga ah, waxyaabaha daryeelka caafimaadka, alaabada bannaanka & safarka, bixinta guriga, xusuusta, iyo wixii la mid ah.
Waxaan ujeedkeedu ahaa inaan noqono lammaanahaaga gaarka ah iyo xafiiska Shiinaha si aan u qabanno wixii aan sameyn lahayn matalaad ahaan oo aan mas'uuliyad buuxda ka qaadno adeeg tayo leh.
Xafiiska: khabiiro waqti-buuxa ah waxay ku xirmaan soo saarayaasha. Xafiiskaaga Halkan!
Bixinta: lagu gorgortami karo bil kasta ama dhigaal ahaan. Lacagta Badbaadi!
Xakamaynta Tayada: a 3rd kormeeraha xisbiga ayaa lacag la siiyaa si uu u kormeero. Tayada Koowaad!
Dhiirrigelinta: qiimaha tooska ah ee warshad Kaydinta Qiimaha!
Gadiid: Keenso waqtiga oo habab kala duwan oo shixnad ah, xagga badda, hawada, tareenka ama boostada (DHL, Fedex).
Adigu aad noogu muhiimsan tahay. Marka waxaan ku boorinaynaa kooxdeena inay noqdaan kuwo waxtar badan oo dhaqso leh. Maaddaama aad tahay wada-hawlgalayaal guuleysta iyo kuwa muddo-dheer ah, waxaan ku dadaali doonnaa inaan khibraddeenna iyo aqoonteenna u dhigno iyada oo aan laga gaabin kiis kasta, iyada oo aan loo eegin inay ku lug leedahay amarka US $ 100 ama amarka US $ 1.000.000.
Waxaan ballan qaaday:
Lagu kalsoonaan karo & Joogto ah: waxaan aragnaa, maqalnaa, taabannaa oo dareemnaa dhawaansho.
Xirfad: dalabyadu waxay diyaar u noqon doonaan saacadaha 24 ama waxay kaa ilaalin doonaan xalka saxda ah.
Aan Hadalno Hada. Xulashadaada koowaad ee deeqaha shaqsi ahaaneed ee gaarka ah iyo waxyaabaha xayeysiinta ku ah Shiinaha - Hi Promos. Email noo soo dir maanta si aad u codsato caawimaad.